Tsoka chinja & Clip Cord Vagadziri, Vatengesi - China tsoka Chinja & Clip Tambo Fekitori
Chigadzirwa zita: simbi isina tsvina (yakakura uye diki) Yakakura: chitiviri saizi: 70 * 105 * 25.5mm saizi yekupakata: 120x80x72mm Mudiki: saizi pedal: 60 * 76 * 25.5mm kurongedza size: 103x75x62mm Huru: Net uremu: 284g Gross huremu: 311g Mudiki: Net uremu: 261g gross uremu 285g Kureba kwetambo: 2m Kutengesa poindi: 1. Stainless simbi zvinhu, zvakakwana huremu, hazviite ngura, kupfeka-kusagadzikana uye nyore kuchenesa; 2. Kune machira ekudzivirira erabha pane ekumusoro uye ezasi epasi, isina-kutsemuka dhizaini, nyoro tsoka inzwe, inogona bette ...
An anti-slip rabha mat ine grooves kumusoro kwekugadzirisa kuri nani. Foni-plug inobatanidza kune chero simba rekupa tattoo. Magadzirirwo: Ruvara: Nhema Matema: Acrylic Tambo kureba: approx. 1.5m / 5ft Package runyorwa: 1 * Tattoo tsoka Chinja Pedal Kurongedza & Dhirivhari Kuti uone zviri nani kuchengetedzeka kwezvinhu zvako, hunyanzvi, zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvirinani uye zvinobudirira kurongedza masevhisi anozopihwa. KUSHANDISA INFORMATION 1. Unotumira pasirese here? Ehe, Tiri kushanda kuunza WJX eve ...
Round 360 degree Tattoo Muchina Tsoka chinja tsoka Pedal
Ruvara: dema 1. 360-degree pedals, yakabatana netambo yakapfava yesilicone, iyo tambo kureba kuri 1.75 metres; 2. Iyo isina-slip dhizaini pazasi inowedzera zvakanyanya coefficient yekukweshera nepasi, uye hapazove nekumwe kunetseka kwekufamba kwetsoka panguva yematatoo; 3. Shanu-yakanongedzwa nyeredzi switch, nyowani micro-kufamba (tinya kuvhura, pusha kuvhara), inokodzera yepamusoro-soro uye yakasimba, Uchishandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, chitarisiko chakanaka; 4. Yakanyatso kuyedzwa isati yasiya fekitori; 5. Rutsoka sw ...
Nyanzvi Round Rutsoka Kudzora Tattoo Pedal
Tattoo tsoka chinongedzo chakakosha switch yekunyora nyora. Iyo ine yakakwira inonzwisisika switch dhizaini, netsoka yako ichitsika pairi, ichaita iyo tattoo muchina simba pamusoro. Chiwanikwa chinhu, ziva zvechokwadi 360 ° kutenderedza nekukurumidza kutsvaira, hapana kona yakafa. Zvimiro: Chiwanikwa chealloy, ziva zvechokwadi 360 ° kutenderedza nekukurumidza kutsvaira, hapana kona yakafa. Inoita kuti tsoka yako igadzikane, nyore kufamba, kudzikamisa kuneta kweateki. 65 zvidimbu zvemhangura mhangura waya ine yakasimba magetsi condiv ...
Basa: Nyanzvi yekutsika tsoka yekupa magetsi Zita: Tattoo footpedal Package inosanganisira: 1pc Ruvara: ichatumira neakasarudzika Advantages Edu Tine makore anopfuura gumi zviitiko zvezvigadzirwa zvinotumirwa muEurope Musika USA .Tiri Tattoo Supply Chikwata, tinogamuchirwa noushamwari kugamuchira diki OEM mirairo. Kukurukurirana kwakanakisa, akanakisa maSevhisi, Hunhu hunovimbiswa nefekitori yakadzika mitengo yekutengesa! OEM inogamuchirwa. Kutumira: 1. PASI POSE KUTUMIRA. 2. Mirairo yakagadziriswa nenguva mushure mekusimbiswa kwekubhadhara. 3. Isu isu ...
Item Zita: Tattoo tsoka tsoka ... Tattoo tsoka chitiviri isutu nemagetsi uye nemuchina we tattoo. Nyore kushandisa uye kushandisa, lightweight, nyore kutakura. Kuita kuti nyora yako ishande nyore uye nyore. Nyanzvi nyowani maturusi ekushandisa ekushandisa ekunyora maartist. Maitiro: Chitarisiko chakanaka uye dhizaini. Inokodzera mhando dzese dzeteki muchina magetsi. Yekutsika kwetsoka chinoshandiswa kudzora switch yemuchina we tattoo. Unganidzo tambo yakareba zvakakwana kuti conn ...
Yakakwira Mhando Tattoo Muchina Tsoka Shandura Tsoka Pedal Mutungamiriri Simba Rinopa
An anti-slip rabha mat ine grooves kumusoro kwekugadzirisa kuri nani. Phono-plug inobatanidza kune chero simba rekupa tattoo. Netsoka tsoka inoshandiswa kudzora iyo tattoo muchina wemagetsi switch. Iyi pedal yakanaka mhando uye yakasununguka kwazvo. Pasuru runyorwa: 1 * Tattoo tsoka Chinja Pedal Yedu maSevhisi 1. 2 maawa kotesheni yekupa. 2. Maemail ese anozopindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana. 3.Muenzaniso wekubhadhara uchadzorerwa kana odha yasimbiswa. MIBVUNZO 1. Ndingaite sei kuti ndiwane sampuli yekutarisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro? ...
Ichi chigadzirwa chiri nyore kushandisa uye chinoshanda zvakanaka kwauri. Nei usinga tarise izvozvi? Maitiro: Asiri-skid pamusoro uye anti-marring base, inokudzivirira iwe nepasi pako. Dema ine yakapusa square dhizaini, yakanaka michina yetatoo. Inogadzikana uye iri nyore kushandisa, sarudzo yakanakisa yerunako salon. Chiedza uye kuponesa-nzvimbo, zvinoshanda zvakanaka kwauri. Yakakwana kune ese marudzi emuchina wetatoo. Magadzirirwo: Type: Tattoo Rutsoka Pedal Chinyorwa: Chipurasitiki Item Saizi: approx. 9 * 6 * 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Item Kurema: Ap ...
Round 360 Nyeredzi Tattoo Yetsoka Shandura Pedal Isina Simbi Isimbi YeTatoo Mashini Tattoo Magetsi Kujekesa Iyi Tattoo Yetsoka Pedal / Tsoka switch ndeyechokwadi nyanzvi yemhando yepamusoro tsoka tsoka inoshanda zvinoshanda kwazvo! Iyo ine tsoka-chinja chitiviri ine anti-skid, isina-marring base. Inokodzera mhando dzese dzeTattoo Machines magetsi magetsi. Inoratidzira Yakakwira-yepamusoro mhando tatoo tsoka, mufashoni! Nyanzvi-yemhando yepamusoro, tsoka-chinja chinongedzo neanti-skid, isina-marring base. Inogadzikana, compact, nyore kutakura uye kushandisa ...
Tiri kutarisa okisheni ye360Â ° Star Dhizaini Tattoo tsoka chitiviri ne5'ft tambo uye yakajairwa 1/4 ″ foni-plug. Inosanganisira non-skid anti-marring base. Izvo zviri nyore kuwana dhizaini zvinopa yakanakisa kudzora muchina. Tine sarudzo dzakasarudzika dzemakiti uye zvishongedzo zvekusarudza kubva. Feature Info: Mamiriro: Brand Nyowani 360Â ° Nyeredzi Dhizaini Tattoo tsoka Pedal Kureba: 5'ft Ruvara: Sirivheri Standard 1/4 ″ isina-simbi foni-plug. Asiri-skid anti-marring base. Divi: 3 "x 3" ...
Iyo yazvino tattoo muchina silicone clip tambo & RCA tambo 6 tsoka kureba (anenge 180 cm) Ukobvu: anenge 6 mm yepamusoro 100% silicone nyoro, 22 AWG yemhangura waya Imwe neimwe yekubatanidza poindi yakaputirwa mupurasitiki chubhu kudzivirira kuputsa Zita: Tattoo Clip Tambo, RCA Tambo Chinyorwa: Silicon / Mhangura Kushandisa: Kune mateki mateki Ruvara: Dema Yero Green Green Bhuruu Purple Tsvuku FAQ 1. Kurongedza sei? - MOLONG Tattoo Brand Package, Yekusarerekera Package, OEM Package (Huru Huru) Inowanikwa 2. Zvakadii nezvehunhu? - Qu ...
Kurema kweNet: 27g Gross uremu: 38g Saizi: 2m * 1.8mm Kurongedza: opp bhegi kurongedza Ruvara: matatu mavara dema - dzvuku denderedzwa - bhuruu Chinongedzo: RCA interface Kubatsira: 1. Tambo-yakanaka hoko mutsetse neyakagara dhizaini, yakanaka mhando uye mhando yakaoma; 2. Yakachena mhangura interface, yakakwira giredhi, pfeka nemishonga; 3. Saizi yepasirese saizi, unogona kutenga nekushandisa nechivimbo; 4. Iyo interface silicone yakasimbiswa, anti-break uye anti-kutsemuka; FAQ Q Zvakadii nezve nguva yekuendesa? Nguva yekuendesa ndeye mazuva 3-5 zvaiti ...